Nkuzi Okike na Nhazi: Onehub | Martech Zone
Dịka blọgụ b-ndepụta, ị na-abụkarị ndị ọchụnta ego azụmaahịa, ndị mmepe sọftụwia, na ndị na-achọ ngwa ọrụ achọ ka ị kwalite ngwaahịa ha. M hụrụ n'anya ịbụ ndị lekwasịrị anya nke uche a, ezie, n'ihi na m hụrụ n'anya na-agụ akwụkwọ na m hụrụ n'anya na-ahụ ngwa si na ahịa. Dịka onye njikwa ngwaahịa, amaara m etu o siri sie ike iwere ngwa nwere ike ma gbanwee ya na ngwa dị ebube.
Ọ bụghị mgbe niile, mana oge ụfọdụ, ị na-etinye aka na ihe pụrụ iche. Sọftụwia kwesịrị ịdị mfe, dị mfe ịnyagharịa, yana arụmọrụ na-atụ anya ihe onye ọrụ chọrọ ịme ọzọ. Onehub bụ ume nke ikuku ọhụrụ ma nwee ihe onye ọrụ chọrọ n'ịrụpụta saịtị ọrụ nke ha ga-enwe obi ụtọ ịkpọ ndị ahịa ha.
Onehub - Kekọrịta Ozi Azụmaahịa
Taa m natara ederede site na mpempe akwụkwọ m site n'aka Laurel Moudy, Onye isi ahịa ahịa nke Onehub. Email ahụ kpọrọ m na 500 ndị na - agụ akwụkwọ m (gụọ maka koodu ịkpọ oku gị) ịnwale Onehub n’anaghị akwụ ụgwọ. O doro anya na, n'otu oge ahụ m natara ọkpụkpọ òkù ahụ, ana m ebugharị email m Ngwa Google ya mere enweghị m ike ikwenye aha m. Aghaghị m ichere ruo anyasị a.
Echere ahụ ruru ya.
Ozugbo ị banyere otu hub, interface ahụ na-egbu egbu, dị mfe ma dị oke Weebụ 2.0. Nnukwu, mpempe akwụkwọ nwere ike ijikwa njikwa pere mpe na oke ọcha zoo plethora nke nhọrọ ị nwere iji wuo saịtị dị egwu.
Nhọrọ mbụ gị na - arụ ọrụ - kedu ka ị ga - esi jiri saịtị ahụ?
Ihe na-esote bụ otu esi emepụta, nhazi ma tinye ihe ndị dị mkpa na blog gị. A na-ewu interface niile na nchịkọta akụkọ WYSIWYG dị nso:
Ozugbo ị chepụtara ma gbakwunye akụrụngwa gị, saịtị ahụ dị njikere ịga!
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwa Onehub nwaa, Laurel dị mma iji nyefee akụkọ beta 500, jiri koodu ịkpọ oku. uzu ahia. Ọ bụrụ n’ị bụ ụlọ ọrụ, onye mmebe, ma ọ bụ onye na - eme websaịtị - enyefela ya. Nke a bụ nnukwu ngwa ma dịkwa mfe iji. Ọ bụrụ na ị nweghị nke dị n'elu - mana ịchọrọ nchekwa ọrụ ma ọ bụghị na ị ga - eji teknụzụ, nke a bụ ngwa zuru oke maka gị.
Tags: mmekotadesignịkekọrịta faịlụotu huburu
Jul 26, 2008 na 12: 53 AM
Ọ bụrụ na ị na-eche, nke a abụghị akwụkwọ nkwado. Ọ na-eju m anya na ogo na ọrụ ọrụ batara na Onehub.
Nov 30, 2008 na 12:28 PM
Ana m ele anya na OneHub na ileba ya anya mbụ ọ dị ka ihe nwere ike ịrụ ọrụ maka m. You ma ma ọ nwere e-mail interface?